‘मबिना कसै–कसैलाई मुस्किल छ पोखरामा ।’ शुक्रबार पोखरा सभागृहको स्टेजमा पछिल्लो पुस्ताका लोकप्रिय गायक प्रमोद खरेल उत्रिए । सङ्गीत पारखीहरुको बेजोड ताली र ‘हुटिङ’बाट उनको स्वागत भयो । गायक खरेलले गीतका सर्जक शीतल गिरीलाई पनि स्टेजमा बोलाए ‘शीतल पनि चिनिनु पर्छ’ भनेर चिनाए दर्शकलाई । गीतसङ्गीतमा जति धेरै आवाज र ताली सुनिन्छ, गायकलाई उतिनै ऊर्जा मिल्छ । आयोजकलाई पनि उत्साहित बनाउँछ । वातावरण त्यस्तै थियो ।
पोखरा सङ्गीत पारखीका लागि उर्वर मानिन्छ । सडक बालबालिकाको सहयोगार्थ आयोजित यस साङ्गीतिक कार्यक्रम भव्यरूपमा सफल भएको बार्दलीका प्रबन्ध निर्देशक मन क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका विशेष व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । (रासस)
गृहकार्य नगरेको भन्दै शिक्षकले कुट्दा विद्यार्थीको हात भाँचियो
मनाङे रिहा, एन्फा कास्कीका अध्यक्षलाई सात दिन थुनामा राख्न अनुमति
इन्टरनेटमा व्यापक ठगीः निरीह उपभोक्ता, रमिते नियामक
मौसममा फेरि बदलीः वर्षाको सम्भावना
‘बल्ने ढुंगा’ छ भन्दै ५० लाख लुट्ने ६ पक्राउ, आँखामा खुर्सानीको धुलो छर्की लुटपाट
चीनमा कोरना भइरसले लियो उग्र रुप, संक्रमणका कारण बीरामी ढल्दै(नयाँ अपडेट)
नेपाली दर्शकलाई सुशान्त खत्रीको ‘स्ट्रिट डान्सर थ्रीडी’ हेर्न बरुण र श्रद्धाको आग्रह
अस्ट्रेलिया काण्ड: पीडित युवतीले लिइन् यस्तो एक्सन!
विकिनी गर्लको ट्याग कहिलेसम्म अदिती जी ?
सुरेन्द्रको नयाँ सिनेमामा अदितीसँग नितेशको रोमान्स ?
‘नाई नभन्नू ल ६’मा अनुभव र सेड्रिनासँगै सलोन पनि !